Midawga musharixiinta oo war kasoo saaray xaaladda doorashada dalka - Tilmaan Media
Midawga musharrixiinta madaxwaynenimada Soomaaliya oo muqdisho shir ku yeeshay ayaa soo saaray baaq ku socda Beesha Caalamka.Qoraal kasoo baxay shirka ayaa looga hadlay xaaladda cakkiran ee doorashada ka taagan iyo sida loo xallin karo.
Midawga musharrixiinta ayaa ku baaqaay in doorashooyinku kadhacaan mid hal magaalo si ay u fududaato in wakhti kooban lagu qabto doorashada. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu xusay in loo baahan yahay guddi doorasho oo dhammaan dhinacyada ay quseyso ay ku qanacsan yihiin iyadoo lagu sheegay qoraalka in goluhu uu diyaariyay xubnaha guddiga farsamo ee laga saarayo guddiga.
Waxay ku baaqeen midawga musharrixiintu in gudoomiyaha Aqalka Sare loo daayo soo magacaabidda liiska xubnaha gobolada waqooyi. Dhanka kale waxay sheegeen in diyaariyeen dadka larabo in ay laga saaro guddiga doorashada ee dawladdu ay diyaarisay. Musharrixiinta ayaa ka digay in dowladdu qabato doorasho ay kamaqan yihiin dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland.
Baaqaan ayaa imaanaya dhawr bari kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday in ay doorashada kabilaabayso dowlad goboleedyada qaarkood iyo Gobolka Banaadir.
Ilhan Cumar oo ku eedeysay madaxweyne Trump in uu ka danbeeyay weerarkii xarunta Capitol Hill